Jaanis Roob 3 ah 1 jaakad roob ah Custom OEM dharka dibadda ah oo aan biyuhu jaket ahayn
Mens-ka-3-in-1 jaakada wajiga ayaa lagu hagaajin karaa si kor loogu qaado ilaalinta iyo raaxada. Waxay si fudud ula qabsan kartaa cimilada daran, sida ceeryaamo culus, roob ama baraf. Skiing Downhill, barafka lagu fuulo, fuulitaanka buuraha, socodka, safarka, ciyaaraha kale ee jiilaalka banaanka iyo munaasabado kala duwan.
Soo hel Jaakadaha Ragga ugu fiican ee Cotton ee Iibiyeyaasha ugu Fiican.
Jaakaddeena Mens-ta ee Dharka Dhadhka ah ee ragga ayaa waxay siisaa ilaalin iftiin iyo mid isku mid ah, jaakaddeenna suufka ah ee 100% ah waa mid waajib ku ah gugaaga dharka gu'ga iyo deyrta. Khaanadda hore ee nooca badhanka ah waxay leedahay nashqad difaac sare leh, oo leh dabool aan la arki karin iyo jeebab badan. Jaakadani waxay leedahay noocayaga caadiga ah iyo nooca loogu talagalay
Kabaha Jiilaalka ee Jiilaalka Caadiga ah ee Tilmaamaha Tilmaamaha Qiimaha Sare ee Qalabka Tufan ee Jiilaalka
Waxaan nahay warshad xirfad leh oo leh nidaam wax soo saar dhameystiran iyo naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah. Jaakadahayaga jaarka ah ayaa jaaliyadaha dibadaha aad looga jecel yahay waxayna aqbalaan qaabab ama qaabab loo habeeyay. Jaakadaheena jajaban ayaa dabeysha iyo biyuhu aan biyuhu xirnayn, fadlan nala soo xiriir haddii aad wax shuruudo ah aad qabtid
Dharka ragga hoos u gasha waa nooc heer sare ah oo kugu haleyn kara xilliga dayrta adiga oo aan kaa dhigin wax culeys badan. Jaakaddan ilmada u adkeynaysa way fududahay in la daboolo waxayna u isticmaashaa dahaar gaagaaban si ay kuugu kululaato markaad dibadda joogto. Jaakadani way fududahay in la keydiyo, markaa waad diyaarin kartaa xitaa markaad socoto.